Fitsangatsanganana tany Eropa: Etazonia dia namoaka kabary tao anatin'ny andro vitsivitsy
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Fitsangatsanganana tany Eropa: Etazonia dia namoaka kabary tao anatin'ny andro vitsivitsy
Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Merkel sy Biden dia miady hevitra momba ny fitsangatsanganan'i Etazonia mankany Eropa
Ny Chancelior Alemanina Angela Merkel no mpitondra eropeana voalohany nitsidika ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden tao amin'ny White House satria niresaka momba ny dia an-dry zareo tany Etazonia tany Eropa.
Ny Chancelior Alemanina Angela Merkel no mpitondra eropeana voalohany nitsidika ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden tao amin'ny White House satria ny lohahevitra anisan'izany ny fitsangatsanganan'i Etazonia tany Eropa no tao anaty fandaharam-potoana.
Ny lohahevitry ny dinika roa tonta dia nahitana ny fiovan'ny toetr'andro, vaksinin'ny COVID-19, fanafihana an-tserasera Rosiana, Okraina ary ny fandokafany ny demokrasia, ary koa ny dia teo amin'i Etazonia sy Eropa.
Ny fitomboan'ny tranga COVID-19 tato ho ato noho ny fihenan'ny Delta dia nahatonga an'i Etazonia nanamaivana ny famerana ny dia.
Ny Chancellor Merkel dia nilaza fa matoky tena amin'ny ekipa COVID any Amerika izy.
Nilaza ny filoha Joe Biden fa tsy ho ela dia ho afaka hamaly ny fanontaniana momba ny dia any Etazonia avy any Eropa izy rehefa nitondra mpikambana ao amin'ny ekipany COVID rehefa nametraka io fanontaniana io ny Chancellor Merkel nandritra ny dinika roa tonta nataony androany. Nilaza i Merkel fa manana “fitokisana rehetra amin'ny ekipa COVID Amerikanina izy.”
Na eo aza ny zava-misy fa nanalefaka ny fameperana ho an'ireo mpandeha amerikanina i Eropa tamin'ny volana lasa teo, dia nitazona fameperana henjana ny Etazonia noho ny fiparitahan'ny ny variana Delta.
Ny filoha lefitra misahana ny raharaham-bahiny amerikanina Tori Emerson Barnes dia namoaka ity fanambarana manaraka ity momba ny fanamarihana nataon'ny filoha Biden momba ny fisokafan'ny dia iraisam-pirenena:
"Mankasitraka ny fanamarihan'ny filoha izahay, nampitaina androany niaraka tamin'ny Chancellor Alemanina Angela Merkel, fa ny fampahalalana bebe kokoa momba ny fotoana fanonganana ny fandràrana ny dia iraisam-pirenena dia afaka tonga ao anatin'ny andro vitsivitsy."